Waa maxay Master nadiif ah?
Master Nadiifi tirtirtaa waxyaabaha aan loo baahnayn, hara, files junk, Daahiriyo maylka adag, Daahiriyo diiwaanka iyo clogs, oo xirtey xarunteedii barnaamijyadooda aan loo baahnayn. Waxa kale oo uu baaritaanku qalab Android u furin iyo qalab xawaare-upka. Engine anti-virus Master Nadiif ah ee ay hubisaa in wareega ilaalinta saacad u qalab aad ka. Tani app ka Kingsoft leedahay in ka badan 40 milyan oo isticmaale adduunka oo dhan.
Codsi kasta oo Android abuuraa lacagta qaar ka mid ah files haraaga ah, files junk, maylka adag. Files ma aha oo kaliya mashquulin boos ee casriga ah, laakiin waxa ay sidoo kale si deg deg ah daadi batari telefoonka ee. Master Nadiifi tirtirtaa files kuwaas oo ka dhigaysa meel aad telefoonka. Thanks to feature ay nadiifinta soo jeeda, lagama yaabo inaad xitaa in ay ogaadaan in nadiifsan la shaqeeya ee asalka ah.
Shaki kuma jiro in Nadiifi Master waa mid ka mid ah xalka ugu wanaagsan ee lagu dardar-up aad Android. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qaar ka mid ah barnaamijyada kale ee software cajiib ah laga heli karo suuqa. Halkan waxaa ku qoran toban iyaga ka mid ah.
10 kale oo ay u nadiifi Master
Wondershare MobileGo caddaynaysa in ay dhabaha ugu wanaagsan Master nadiifi ee. Nidaamka laba-qayb ka kooban yahay app Android iyo arjiga codsiga PC daaqadaha.
App Android tirtirtaa files aan loo baahnayn, oo xirtey xarunteedii codsiyada loo baahnayn ka phone in la abuuro qaar ka mid ah meel iyo xawaaraha-up aad telefoonka. Wondershare MobileGo kaloo ka caawisaa in files ka PC wareejiyo si aad telefoon smart in kaliya dhowr daqiiqo. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si ay u maareeyaan xogta aad telefoonka ee adiga oo isticmaaleya isticmaale PC. Software abuuraa dib-up for macluumaadka telefoonka gudahooda jajab ee seconds.
Maya 2. TrustGo
TrustGo waa codsi kale oo cajiib ah in ogaadaa iyo tirtirtaa barnaamijyadooda, spyware, iyo furin oo keeni arrimaha ammaanka. Waxa kale oo ay bixisaa interface cajiib ah oo kaa caawin kara in aad la socon aad isticmaalka telefoonka ee xogta, isticmaalka xasuusta, isticmaalka batari, iwm TrustGo ee engine anti-virus bixisaa wareega ilaalinta saacad in qalabka ka.
App ayaa lagala soo bixi karaa lacag la'aan ah oo ah qiimaha, mana jiraan dhibaatooyin istaahisho in laga hadlo in app this.
No 3. Advanced Task Killer u Android
Soo diyaariyay ReChild app gaare, Advanced Task Killer u Android Daahiriyo xasuusta telefoonka ee la tirtiro files aan loo baahnayn, oo la tirtiro codsiyada aan loo baahnayn.
Jidka app ee shaqaynaya waa mid aad u fudud, waxay tirtirtaa barnaamijyadooda aan loo baahnayn iyo files. Laakiin app ma caddaynaysa in ay waxtar u leh qalabka shaqeeyaan Android Gingerbread iyo wixii ka sareeya, kuwan oo versions of dalab doorasho Android si ay ula socdaan barnaamijyadooda isticmaalaya Tababaraha barnaamijyadooda. Sidaas, laga yaabee in aadan qalabka aan u baahan tahay tababare hawl dheeraad ah oo dilaa.
No Coobbi 4. App Cache
Haddii la iska indho tiray, khasnado mashquulin kartaa qayb badan ee xasuusta aad telefoonka ee. Nadiifinta khasnado caddayn karaan in ay sida ugu wanaagsan si ay u abuuraan bannaan oo dheeraad ah in aad casriga ah, taasina waa waxa App Coobbi Cache u Android kuu sameeyey.
Soo diyaariyay gaare app lagu magacaabo Infolife, codsigan uu baaritaanku qalab aad iyo muujin karaan tirada saxda ah ee meel degan khasnado. Dhammaan wixii aad u baahan tahay inaad samayso waa guji "nadiif" in laga takhaluso khasnado oo dhan.
Qaybta kaliya xun ee app waxay u muuqataa in ay ka maqan feature tirtirka auto khasnado. App Cache Coobbi muujinaysaa qaylodhaan markii khasnado gaadho ilaa xad gaar ah, laakiin waxaa jira wax aan u dhigay auto tirtirto.
No 5. Adguard u Android
Sida magacaba ka muuqata, codsiga diiradda badan oo ku saabsan takhaluso xayeysiis rabin, socoshada, iyo websites xaasidnimo. Codsiga waxaa maamula si loo yareeyo waqtiga loading goobaha, iyo dadajiyaa-up telefoonka iyo weliba.
Nasiib darro, app ee aan la heli karin on Google Play ayaa in lagu xiro sida app xisbiga saddexaad.
Plus, codsiga waa la jaan qaada gmail, oo la shaqeeya 4.3 ama ka dib versions of software Google.
Qaar ka mid ah farriimaha qoraalka ah waa muhiim, balse sidoo kale ay ku dhamaan-up degan badan oo boos ee casriga ah. Mobogenie waa codsi ah oo kaa caawin kara in aad maamuli fariimaha qoraalka aad, iyo in la abuuro dib-oo iyaga aawadood aad kombuutarka. App wuxuu kaloo ka caawinayaa in maaraynta xiriirrada on qalab aad.
Codsiga waxaa loo abuuray by Beijing Gamease Age Digital Tech. Maareynta fariimaha qoraalka ah kugu caawin karo samaynta qaar ka mid ah meel bannaan oo dheeraad ah in aad telefoon, laakiin codsigan hubaal ah ma aha sida mid waxtar leh sida kuwa sameeyo meel iyadoo la tirtirayo khasnado ama maaraynta barnaamijyadooda kale.
No Coobbi 7. du Speed ​​buusterka Cache
Software Tani waa laga yaabaa labaad tartame wanaagsan ee lagu nadiifiyo Master ka dib markii Wondershare MobileGo.
Coobbi du Speed ​​buusterka Cache nadiifiyaa qashinka iyo khasnado files ka phone smart. The horumarinta ee software this sheegan in app this kordhin kartaa xawaaraha aad telefoonka ee ay ilaa 60 boqolkiiba. Waxay maamushaa codsiyada iyo gacanta ku auto bilowga barnaamijyadooda. Coobbi du Speed ​​buusterka Cache waxaa sidoo kale ku qalabaysan anti-virus iyo scanners qoriga. App Tani waxba kuma dhaleeceeyo, oo inta badan isticmaala faraxsan yihiin.
Maya 8. Teebik Apps Mobile Security & Virus Anti u Android
Teebik Apps Mobile Ammaanka iyo software Virus Anti ilaalin ka qoriga, spyware, furin iyo fayrusyada. Software Tani waxay si toos ah uu baaritaanku oo dhan barnaamijyadooda ka dib markii muddo gaar ah, oo kaa hayo updated ku saabsan ammaanka qalab ee. Waxaa kale oo aad u digaa in-case haddii aad rakibi furin ama spyware. Waxaad kala socon kartaa oo ku saabsan Chine in mashquulin badan oo boos iyo tirtirto kuwa kuwa aan loo baahnayn.
Your phone dardar-up karaa sabab u tahay software this, laakiin nasiib daro, ma in ay is ogow of khasnado iyo files junk kale abuuray by barnaamijyadooda ka maareyn karto.
No 9. buustarka ee Android
Waxaa laga yaabaa, ayaa laga yaabaa in aad marnaba maqlay oo ku saabsan suunka NQ Mobile Ammaanka ee Android. Laakiin, app ayaa lagu rakibay in ka badan 50 milyan oo dadka isticmaala. Waxaa la socon kara dhamaan qalabka Android.
Software ayaa si deg deg ah uu baaritaanku telefoonka / PC kiniin ah oo tilmaamaysa boqolleyda xasuusta qalab oo la qabsadeen, oo ay la socdaan talooyin ku saabsan files aan loo baahnayn, shaqooyinka. Dhammaan wixii aad u baahan tahay inaad samayso waa guji tirtirto. Buustarka ee Android waa ikhtiyaarka ugu fiican haddii aad raadinayso app lacag la'aan ah in ay is ogow of xasuusta telefoonka aad. Qaybta kaliya xun oo ku saabsan app tani waa la xiriirta jacaylka iyo nacaybka la daadiyo qaarkood in ay si ku shaqeeya ee asalka ah.
AirDroid u Android bixisaa ka fiicanu xakamayso barnaamijyadooda phone smart, iyo sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad si ay u maareeyaan content aad telefoonka ee ka web browser. Files beddelashada, sawiro, iyo videos uu noqonayaa mid aad u fudud ay sabab u tahay app this. Software ayaa sidoo kale ka heleysaa macluumaad ku-waqtiga dhabta ah oo ku saabsan barnaamijyadooda socda, geedi socodka, iyo files warbaahinta in ay ku kaydsan yihiin xasuusta telefoonka aad iyo sidoo kale kaarka SD.
App waxay u muuqataa inay u badan diiradda in ay bixiyaan xogta kala iibsiga iyo maareynta file. Haddii aad raadinayso app ah oo kaa caawin kara inaad ka takhalusaan files rabin, AirDroid ma noqon karaan ikhtiyaarka ugu fiican.
Sida loo kala cadeeyo xogta ka iPod ah
> Resource > Clean-up > 10 Beddelka nadiifi Master ah ee Android